Fambolena Tropikaly - Wikipedia
Amin’ny izao tontolo izao, be kokoa ny olona mamelon-tena amin’ny fambolena tropikaly noho ny asa hafa rehetra. Ny ankabeazan’ireto olona ireto dia mpamboly tsy mamaoka ambom’bokatra sady mipetraka amin’ny toerana tropikaly. Mamboly voly fihinana ho an’ny fandaniana anatiny no ny tanjon’ny fambolena tropikaly, kanefa misy toerana mamoaka voly fanondrana ohatra (menaka palma, paraky, siramamy, sns).
Rehefa mamaritra ny tany tropikaly, dia mampiasa teny manazava faritra manana toetany mitovitovy (ohatra: habetsahan’ny orana, toetoetry ny tontolo onenana, karazan-tany, sns).
Teny ankapobeny dia tropikaly be orana (ala mikitroka), tropikaly maina (tany efitra sy toerana misy tany maina karakaina), na tropikaly varatraza (toerana misy vanim-potoana be orana/maina voafetra). Mahasoa ireto teny voafaritra ireto rehefa mandinika ny fambolena satria raha misy teknika fambelona mandaitra amin’ny toetany ankiray, dia tokony handaitra amin’ny toerana hafa misy ity toetany mitovitovy ity, na dia mifanohitra amin’ny lafiny ara-giloby aza ireto toerana ireto. Ny teknika ampiasana amin’ny faritra tsy tropikaly matetika tsy mety amin’ny fambolena an-tany tropikaly. Tamin’ny tapany faharoa an’ny taon-jato faha-20 dia betsaka ny fanandramana mandika ny fomba fambolena mahomby avy amin’ny tany tsy tropikaly. Kanefa tsy mandaitra noho ny toetany, karazana tany, sy fomba fizarazaran’ny tany samihafa any tany tropikaly.
Nony nandaitra ireto fomba fambolena ireto dia nanasoa ny mpamboly manana tany malalaka, satria miorona amin’ny famokarana lehibe ny teknikan’ny fambolena amin’ny tany tsy tropikaly. Matetika mamory tany mamokatra ny mpanam-bola na orinasa ary voailikilika ny mpamboly mandinika ho any amin’ny tany tsy mamokatra.
1 Revolisiona Maitso
2 Fielezan’ny zavamaniry
3 Fiarovana ny Zavamaniry
5 Fitarihandrano amin’ny lenta kely
6 Lavaka fitahirizandrano
7 Fitarihandrano Tete Gamela
8 Paompy Pedala
9 Fanarahamaso ny Bibikely
9.1 Fifandimbiasan’ny voly ambolena
10 Ny Fangejana lehibe
10.1 Ny fambolena tsy erantany
10.2 Ririnina matimaty
10.3 Tany Asidra
10.5 Zavamaniry sarotiny amin’ny halavan’ny andro
10.6 Fikapana ny ala tropikaly mba hamokarana sakafo
10.7 Kely ny fampiasam-bola any Afrika, izay mangeja ny fanondrana ny voly tropikaly
10.8 Fisiana voly fihinana vazaha amin’ny vidiny mora
11 Voly mamaky lay
12 Fotoanan’ny hanoanana
12.1 Voly tropikaly ambolena an-davanandro
Ny “Revolisiona Maitso” dia anarana nomena ny tetikasa fanatsarana fambolena mahomby indrindrina hatramin’izao any amin’ny tany tropikaly. Ny tanjony dia ny manatsara katsaka, vary sy karazana varimbazaha amin’ny fomba fampitomboana ny voly vokarina amin’ny alalan’ny masomboly ampiasaina. Ankoatra izany, nanatsara ny fomba fambolena tsotra, indrindra ho an’ny mpamboly vary, ny revolisiona maitso. Be kokoa ny fitomboan’ny voly vokarina noho ny fitomboan’ny mponina – isan-taona taorian’ny 1950, nihamaro ny famokarana isaky ny mponina, indrindraindrindra i Azia izay mitana ny laharana voalohany. Anisan’ny lafiny mahatalanjona ny maro amin’ny Revolisiona Maitso dia ny vidiny : 100 tapitrisa dolara hatramin’ny 1990, izany hoe, mora kokoa noho ny vidin’ny fiaramanidina Boeing 747 amin’ny taona 2005.
Maro ny zavamaniry tropikaly fihinana izay miely avy amin’ny masomboly taho. Mila voa miaro tsimoka ny zavamaniry amin’ny ririnina mangatsiaka na toetrandro masiaka (ohatra haintany), kanefa amin’ny toetany mety amin’ny fanirian’ny zavamaniry mandritra ny taona dia tokony hiely amin’ny alalan’ny masomboly taho/faka (tsy amin’ny alalan’ny voa). Raha mandingana ny dingan’ny voa ny zavamaniry, dia afaka manahaingana ny fitomboana sy ny fizotran’ny fampitomboana taranaka. Na izany aza dia mety ny fambolena voly tropikaly amin’ny alalan’ny voa.
Fiarovana ny ZavamaniryModifier
Maro ny karazana zavamaniry tropikaly misy poizina iarovany tena. Isan’ireny voly tropikaly fihinana andavanandro ireny ny mangahazo, izay mamokatra poizina antsoina hoe “cyanure” ary mahafaty biby raha tsy voaomana ara-dalana sy be loatra ny fihinany azy. Maro karazana ny poizin’ny zavamaniry kanefa tsy ilaina ny fanalavirana ny zavamaniry misy poizina satria efa manana fahaizana manony ireto poizina ireto ny ankamaroan’ny olona.
Ao amin’ny zezibazaha misy nitrozenina (N), fosforo (P), sy potasioma (K); nitrozenina no fangaro be indrindra amin’ireto zezika arabarotra ireto.
Kely ny oksizena ao anatin’ny rivotra ary ny nitrozenina dia ny mpiorina be indrindra. Ampiasaina ny nitrozenina mba hanamboatra proteina ho lasa nofo amin’ny biby mampinono sy tambatselan’ny zavamaniry. Raha betaska ny tahan’ny nitrozenina anatin’ny tany, dia haingana kokoa ny fitomboan’ny zavamaniry. Karazana zavamaniry ny legiominozy ary miaraka amin’ny bakteria (rizobia) mamindra nitrozenina avy amin’ny rivotra ho amin’ny tany mba hahafahan’ny zavamaniry hafa mampiasa azy.
Ny zezika maitso dia zavamaniry manatsara ny tany, mifehy ny fiparitahan’ny ahitra ratsy, mampiadana ny fikaohan-tany, ary – rehefa mamboly legiominozy – mampitombo ny tahan’ny nitrozenina ao anatin’ny tany. Ny zezika maitso tropikaly be mpampiasa indrindra dia ny tsaramaso vilaory satria mamokatra firakotra matevina amin’ny vahy sy ravina mba hanempotra ny ahitra ratsy sy mampiditra nitrozenina ao anatin’ny tany izy. Mahazaka haintany, tany tsy lonaka, sy tany asidra ihany koa ny tsaramaso vilaory. Azo asolo ny tsaramaso vilaory koa ny tsaramaso “Lablab”, “Canavalia”, sy ny “Phaseolus coccineus”. Rehefa maro santimetatra ny hatevin’ny firakotry ny zezika maitso dia voakapa sy voadidy ilay izy ary ambolena ao ambonin’ity zezika ity ny voly. Be mpampiasa ny teknika kapa/zezika any Meksika Atsimo, Goatemala, Hondorasa; ary taona maromaro lasa izay no nanomboka nisiany tany Brazila sy Afrika afovoany. Nosoloina kapa/zezika ny tavy tamin’ireto toerana ireto ary izany no ahafahan’ny mpamboly mamboly tsy an-kijanona ny tany mitovy mandritra ny taona maromaro.
Fitarihandrano amin’ny lenta kelyModifier
Amin’ny tany tropikaly dia betsaka ny toerana ampy ny fisiky mba hamelona ny voly fihinan’ny mponina; kanefa, tsy avy ara-potoana foana na amin’ny fotoana mety amin’ny fambolena ny orana. Olana tsy ankijanona ny fifehezana ny fampiasana rano. Kanefa mahay mamboly amin’ny tany efitra ny mpamboly rehefa mahomby ny famoriana sy fitahirizana rano amin’ny vidiny ambany. Amin’ny toerana maina rehefa avy ny orana dia matetika betsaka izy, kanefa ny tany maina tsy mahay mitroka ity rano be ity. Be loatra ny rano mibosasaka ka tsy maintsy tohanana sy hazonina.
Mampiasa teknika fitarihandrano maoderina ny mpamboly goavana amin’ny tany tropikaly mitovitovy amin’ny teknika misy amin’ny tany tsy tropikaly (ohatra ny fitarihandrano tete any Isiraely).
Sary:Water harvesting pits.jpg
Anisan’ny fomba fitahirizandrano ho amin’ny fitarihandrano tsotra indrindra ny lavaka fitahirizandrano. Mandavaka lavaka lehibe eny an-tsaha ary manosona ny fanambaniny amin’ny plastika ny mpamboly mba hamoriana ranonorana. Rehefa tonga ny fararano dia mbola manana rano hanondrahana ny voliny ny mpamboly. Tena mahasoa ity teknika ity amin’ny toerana be tendrombohitra satria mibosasaka vetivety ny ranonorana any.
Amin’ny taona misy fisiky aradalana, mety haharitra volana maromaro kokoa amin’ny fotoana fambolena ny lavaka fitahirizandrano. Matetika raha manana amby volana iray amin’ny fotoana fambolena ny mpamboly dia afaka mamboly vary afara. Ohatra, ny fotoana fambolena dia dimy volana ary maniry mandritry ny volana telo na efatra ny voly fihinanan’ny mpamboly, ka raha manana amby volana iray, dia mety ho ampy ny fotoana hamboleny voly indroa. Amin’ny fotoana misy haintany, afaka mamory ny fisiky izay misy mba hiantoka ny vary aloha.
Fitarihandrano Tete GamelaModifier
Fitarihandrano Tete Gamela
Ny fitarihandrano tete gamela dia karazana fitarihandrano misy gamela afatotra amin’ny tsatoka. Ao ambanin’ny gamela misy fantsona malemy be lavaka kely mba handefasana rano hanondrahana voly. Rehefa feno ny gamela, miditra ao anatin’ny fantsona ny rano ary mivoaka amin’ny lavaka kely. Ara-panandramana, mila rano 40 litatra isan-andro isaky ny zavamaniry 100, kanefa samy hafa ny filan’ny voly isan-karazany.
Ny paompy pedala dia mampiasa ny herin’olombelona (herim-batana) mba hanaingana rano avy amin’ny halalina fito metatra farafabetsany. Manosika an-tongotra ny pedala ny mpamboly mba hibatana ny rano. Mitovy ny asan’ity paompy ity amin’ny paompy misy motera kanefa mora be kokoa ny vidiny ary tsy mila lasantsy amelomana azy. Mety manainga rano fito metatra goba avy amin’ny lavadrano (na farihy na renirano) mandritra ny adiny iray izy. Matetika vita eo an-toerana ny paompy pedala satria tsotra sy mora ny fanamboarana azy.
Ny paompy pedala dia karazana paompy mitroka, izay noforonina tamin’ny fiandohan’ny taona 1980 tany Bangladesha. Ny ankamaron’ny paompy pedala vita avy any Afrika dia paompy pedala mitsindry, izay karazana paompy tsara kokoa noho ny paompy pedala tsotra (mitroka) satria manosika rano amin’ny tsindry. Ny tombontsoan’ny paompy pedala mitsindry dia mahay mipaompy rano miakatra vohitra na hatramin’ny toerana lavitra.
Fanarahamaso ny BibikelyModifier
Fifandimbiasan’ny voly ambolenaModifier
Fifandimbiasan’ny voly ambolena : voly samy hafa efatra mifamdimby amin’ny tany iray
Miankina amin’ny fifandimbiasan’ny voly ambolena ny fanarahamaso ny bibikely any amin’ny tany tropikaly. Raha voly iray ihany no ambolena miverimberina amin’ny tany iray,dia mora ny hitomboan’ny bibikely sy aretina manimba ity karazana voly ity.
Ny fitsipiky ny fifandimbiasan’ny voly ambolena amin’ny ankapobeany dia ny tsy fambolena voly iray indroa miantoana amin’ny tany iray. Ny vokatr’izany dia mampijanona ny siklan’ny bibikely, aretina, sy ahitra ratsy manimba ny voly fihinana. Mihena kokoa ny fiankinandohan’ny mpamboly amin’ny fanafody famonoana bibikely raha ampifandimbiasana ny voly ambolena. Mandaitra ny fifandimbiasan’ny voly ambolena raha toa ka misy voly iray misolo ity voly izay misy bibikely/areina manokana manimba azy ity. Ohatra izany, rehefa maniry ny voly vaovao, dia maty mosarena ny bibikely/aretina izay nihinana ny voly taloha. Matetika misy , noho izany, dia ela ny elanelan’ny fotoana fiotazana ny voly voalohany sy ny fambolena azy indray, ary aza antoka ny fahavitsian’ny bibikely/aretina manimba azy.
Ankoatra izany, tsara ho an’ny tany ny fifandimbiasan’ny voly ambolena satria matetika samy hafa ny mineraly ampiasain’ny voly dia tsy mora reraka ny tany. Raha mamboly zezika maitso ny mpamboly dia mety mihatsara mihitsy ny kalitaon’ny tany.
Ny Fangejana lehibeModifier
Ny fambolena tsy erantanyModifier
Ny ankamaroan’ny voly novolena any amin’ny tontolon’ny fandrosoana dia fambolena avy any Eoropa sy Amerika Avaratra (Ohatra: varimbazaha, katsaka, sns). Satria avy amin’ny toerana tsy tropikaly ireo voly ireo dia tsy mahazatra amin’ny teotany tropikaly. Vokatr’izany, mamokatra kely kokoa izy noho ny voly teratany ary tsy mahavita miaro tena amin’ny bibikely/aretina tahaka ny voly teratany.
Matimaty ny ririnina amin’ny tany tropikaly ary tsy misy fanala, oram-panala, sy ranomandry, dia mampitombo foana ny bibikely mandritra ny taona. Amin’ny tany tsy tropikaly dia maty ny ankabeazan’ny bibikely amin’ny ririnina (satria mangatsiaka loatra ary tsy misy sakafo hohaniny) ka rehefa tonga ny lohataona dia miverina mitsiry ny zavamaniry ary vitsy ny bibikely, izay hany tombontsoa ho an’ny zavamaniry any. Kanefa amin’ny tany tropikaly rehefa maniry ny voly dia efa misy bibikely lehibe sady noana (satria tsy maty mandritran’ny ririnina izy ireo).
Sary:Roots in Acid Soil.jpg
Faka landy amin’ny tany asidra
Matetika ny tany amin’ny tany tropikaly be orana dia be asidra sy kely mineraly; vetivety ny fihoton’ny zavatra organika satria mafana ny maripana, lena foana ny tany, sy mando ny rivotra. Be orana, ary indrindraindrindra ny orana varatraza, izay manala ny mineraly ao anatin’ny tany.
Viraty dia ny karazana vy be indrindra ao anatin’ny kokon’ny tany. Misy viraty ao anatin’ny tany na aiza na aiza sy amin’ny toetany rehetra. Rehefa amin’ny endrika azo levonina ny viraty dia mahafaty zavamaniry satria manimba faka, kanefa, tsy azo levonina izy amin’ny tany evanevana (tsy asidra) sy alkalinina. Miankina amin’ny tahan’ny asidra ny halonaky ny tany, ary raha be kokoa ny asidra amin’ny tany dia be kokoa ny viraty azo levonina (raha latsaky ny 5 ny pH-n’ny tany). Ampahatelon’ny tany tropikaly eo ho eo no asidra loatra mba hampivelomana voly fihinana tsy teretany. Ireo tany tropikaly be asidra dia ny tany azo ambolena midadasika indrindra ary mbola tsy misy mpitrandraka eto an-tany, ary noho izany, manan-danja ny fampiasana azy no sady mandaitra kokoa mba ho azo antoka ny sakofon’izao tontolo izao.
Araka ny Winrock International dia “81%-n’ny tany tropikaly be orana any Amerika Latina, 56% any Afrika sy 38% any Azia dia tany asidra.”
Amin’ny fambolena arabarotra, matetika mampiasa sokay mba hampievanevana ny asidra anatin’ny tany ny mpamboly kanefa tsy manam-bola mividy sokay ny mpamboly kely sy mahantra ka miankina amin’ny tavy. Mamela lavenona ambon’ny tany ny zavamaniry teo ampiandohana izay may. Ity lavenona ity dia hampievanevana ny tany asidra mba hahazoana hamboly voly fihinana. Kanefa, mihaasidra miandalana ny tany ary afaka taona vitsivitsy tsy maintsy hifindra handoro tany vaovao ny mpamboly.
Ny lokon’ny tany amin’ny toerana lena dia vokatry ny fiaboana ôksizenina. Ny tany mena ihany koa dia vokatry ny fiaboana ôksizenin’ny vy. Ny tany mavo dia vokatry ny fiaboana ôksizenin’ny viraty.
Ny fahasiran’ny tany dia zavamitranga ara-voajanahary amin’ny tany maina satria tsy ampy ny ranonorana tokony hifaoka ny sira any ambany sy any ivelan’ny faritry ny fakan’ny zavamaniry. Matetika mampitombo ny fahasiran’ny tany ny fitarihandrano satria ny rano avy amin’ny renirano sy fantsakana dia be sira kokoa noho ny ranonorana. Mitombo ny sira anatin’ny tany rehefa mietona ny ranom-pitarihandrano akain’ny faritry ny velaran-tany. Ny olan’ny fambolena amin’ny tany maina dia tsy maintsy ampiasaina ny teknikan’ny fitarihandrano mba hampitomboana ny fahasiran’ny tany.
Zavamaniry sarotiny amin’ny halavan’ny androModifier
Mandritra ny fahavaratra dia lava kokoa ny fahazavan’ny andro ary mifanohitra amin’ny ririnina izay fohy kokoa ny fahazavan’ny andro. Amin’ny toerana akainin’ny ekoatera, miavaka kely fotsiny ny halavan’ny fahazavan’ny andro ary any amin’ny ekoatera, tsy miova mihitsy ny halavan’ny fahazavan’ny andro (adiny 12 sy ≈7 minitra isan-andro). Kanefa amin’ny toerana tena avo na iva ny laharampehintany, miavaka be ny halavan’ny fahazavan’ny andro amin’ny fahavaratra sy ny ririnina. Ohatra, amin’ny Helsinki, Finlanda dia ny fahazavan’ny andro lava indrindra amin’ny fahavaratra dia maharitra 18 ora, 55 minitra sy 53 segondra. Ny andro fohy indrindra amin’ny ririnina dia maharitra 5 ora, 48 minitra sy 57 segondra.
Misy zavamaniry mila fotoam-pahazavana lava ary tsy maintsy handray ora maromaro amin’ny fahazavana isan’andro alohan‘ny hitsiriany, hamelanany, na hamokarany voankazo. Raha tsy ampy ny fahazavana dia mety tsy hahavita hampitombo taranaka izy satria tsy mahavita voa. Ohatra izany, indraidray tsy mamokatra loatra amin’ny tany tropikaly ny voly famboly avy any amin’ny tany tsy tropikaly.
Fikapana ny ala tropikaly mba hamokarana sakafoModifier
Fambolena palma menaka any Indonezia
Amin’ny tany tropikaly, indrindra i Indonezia sy ny firenen’i Azia Atsimo-Atsinanana, dia betsaka ny ala kapaina isan-taona mba hamokarana zavatra fihinana. Ohatra anakiroa dia ny tany fambolena palma menaka any Indonezia sy ny fambolena vary an-tanety ampisaina ny teknika tavy any Azia Atsimo-Atsinanana. Manampy amin’ny fitomboan’ny hafanan’izao tontolo izao izany (misarika kabônina diôksizenina rehefa velona ny hazo ary manafaka azy rehefa maty) ary mampihena ny fanavahana biolojika.
Kely ny fampiasam-bola any Afrika, izay mangeja ny fanondrana ny voly tropikalyModifier
Amin’ny toerana tropikaly sasany (indrindraindrindra ny kontinanta Afrika), vitsy ny orinasa mivarotra voly fihinana amin’ny mpamatsy arabarotra ngeza be. Mazava ity zavamiseho ity rehefa miditra any amina tsena izylay (“supermarché amin’ny teny frantsay) any amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana (oh: Afrika); satria saika ny vokatra fihinana rehetra dia avy amina orinasa avy any ivelany.
Vokatra izany, tsy mahalafo mihitsy (ny ankabeazan’ny voly) na mahalafo kelikely (ohatra ny papay, goavy, manga, kakao, sns, karazana voly hovidian’ny orinasa vazaha) ny voly tropikaly (anana, serealy, voankazo), kanefa lafo ny vidiny amin’ny tsena eoropeana (satria kely ny famorakana sy betsaka ny fangatahana vokatra voavoa).
Any amin’ny tsena tsotra anatiny (tsy tsena izylay), afaka mahita ireto vokatra ireto ny mpividy ka araka ny fotoany sy ny faritra misy azy. Matetika amin’ireo toerana ireo, ambany ny vidin’ny vokatra ary kely kokoa ny tombontsoa azon’ny mpamboly noho izay azon’ny any andafy.
Fisiana voly fihinana vazaha amin’ny vidiny moraModifier
Any amin’i Vondrona Eoropeana sy i Etazonia dia manome vola ho an’ny mpamokatra voly fihinana sy mpiompy ny fanjakana. Misy vokatra mora kokoa amin’ireny firenena mandroso ireny noho ny any amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana (ohatra akoho).
Voly mamaky layModifier
Ny voly mamaky lay dia ireo zavamaniry izay ambolen’ny mpamboly amin’ny tany simba (ohatra amin’ny tany be lavaka na tany nanomboka ho lasa tany efitra). Ny tanjon’ny fambolena ny voly mamaky lay dia tsy natao hamokatra voly fihinana na voly fanondrana fa hanatsara sy hanome aina ho an’ny tany ka rehefa avy eo dia azo ambolena voly isan-karazana. Ny legiominezy (izay zavamaniry mamindra nitrozenina ho amin’ny tany) no be mampiasa.
Ny fotoanan’ny hanoanana dia ilay fotoana eo enelanelan’ny halanian’ny tahirin-bokatra avy amin’ny fijinjana farany sy ny fijinjana manaraka. Na dia amin’ny taona ara-dalana aza dia mampihena ny sakafo hohaniny ny fianakaviana maromaro amin’ity fotoana ity. Tonga matetika ny fotoanan’ny hanoanana amin’ny fiandohan’ny fanetsana na aoriana kely. Noho izany, mianjady ny mpamboly ny tsy fahampian-tsakafo amin’ny fotoana tokony hanaovany ireo asany mafy indrindra.
Fomba iray analefahana ny vokatry ny fotoanan’ny hanoanana dia ny fambolena voly mamokatra mandava-taona, toy ny akondro amin’ny toerana lena sy ny mangahazo amin’ny toerana maina. Ohatra iray, ny fianakaviana manana tsirin’akondro folo mamokatra mandritra ny fotoanan’ny hanoanana dia tsy tokony hijaly loatra. Azo heverina ny fambolena vomanga, pitipoa voromahailala, sy ananambo ny mpamboly.
Voly tropikaly ambolena an-davanandroModifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fambolena_Tropikaly&oldid=637175"
Dernière modification le 11 Mey 2013, à 13:04
Voaova farany tamin'ny 11 Mey 2013 amin'ny 13:04 ity pejy ity.